Siciid Deni oo soo saaray go,aano la xiriira deegaanka - Tilmaan Media
Siciid Deni oo soo saaray go,aano la xiriira deegaanka
Madaxwaynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa wareegto uu soo saaray ku amray saddex wasaaradood oo kala ah wasaaradda Deegaanka, Arrimaha Gudaha iyo Amniga in ay ka hor tagaan dhisidda iyo deegaanaynta dhamaan dhul-daaqsimeedka ku yaalla Puntland.
“Waxaa Dhammaan Wasaradaha iyo Taliyeyaasha Ciidamada Booliska iyo Daraawiishta ee wareegtadani sida tooska ah ugu socoto la farayaa, laga billaabo maanta oo ay Taariikhdu tahay 05/07/2020, in la joojiyay dhismeyaasha iyo degaameynta Dhul-daaqsimeedka Degaanada Puntland” ayaa lagu yiri wareegtada kasoo baxday Xafiiska Madaxwaynaha Puntland.
Sidoo kale wareegtada waxaa lagu sheegay in lasoo saari doono shuruuc ka raaco marka ladoonayo in dhul cusub la deegaameeyo.
Tallaabadan ayaa haddii lameel mariyo kaqayb qaadanaysa ilaalinta deegaanka iyo bilicda Puntland.
Madaxda Dowlad Gobobleedyada oo lagu wado dhawaan in ay kulmaan